ओमकार टाइम्स लाइसेन्स फेल चिकित्सक विभूषित – OMKARTIMES
काठमाडौं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा पटकपटक अनुतीर्ण व्यक्ति चिकित्सकको रुपमा आइतबार राष्ट्रपतिद्वारा बिभूषित भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (निलकण्ठ नगरपालकिा–३ शान्त बजार धादिङ) मा कार्यरत राम थापा क्षेत्री प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी) पदकबाट विभूषित भएको फेला परेको हो।
मेडिकल काउन्सिलले लिने काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा उतीर्ण नगरी डा.. लेख्ने अधिकार हुँदैन तर क्षेत्रीलाई चिकित्सकको हैसियतमा पदक दिइएको खुल्न आएको छ।
बंगलादेशबाट एमबीबीएस गरेको थापा मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा पटकपटक अनुतीर्ण भएपनि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको. ठाडो सिफारिसका आधारका पदक हात पार्न सफल भएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अंकुर साहले क्षेत्री चिकित्सकको रुपमा काउन्सिलमा दर्ता नभएको बताए। थापाले काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा दुई वर्षदेखि दिँदै आएको देखिएको तर अहिलेसम्म उतीर्ण नभएको काउन्सिले चिकित्सकको रुपमा मान्यता प्रदान नगरेको उनले स्पष्ट पारे।
थापाको नाम सिफारिस हुँदै बिबादमा आएको बताउँदैे चिकित्सकको रुपमा दर्ता नै नभएको व्यक्तिले चिकित्सकको हैसियतमा पदक पाउँदा आफूहरु पनि आश्चर्यमा परेको डा. साहको भनाइ छ। उनले सिफारिस र छनोट गर्ने निकायले पनि काउन्सिलसँग भेरीफाई नगेरको उनले जनाए।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव छविन्द्र पराजुलीले गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको घोषित नामावलीको आधारमा विभूषण प्रदान गरिएको बताए। यो गृह मन्त्रालयको काम भएकाले गृह मन्त्रालयमा नै बुझ्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालय विभूषण शाखाका उपसचिव हरि पन्तले संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट घोषित विभूषण मध्ये उक्त मानपदवी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नामावली मात्र आफूहरुले पठाएको जिकरि गरे। उनले रक्षामन्त्री गृहमन्त्री, गृह सचिवसहितको आठ सदस्य विभूषण समितिको सिफारिस आधारमा विभिन्न प्रकृतिका विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण पठाइएको स्पष्ट पारे। अन्य विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उपसचिव पन्तको भनाइ छ।
विभूषण हुने क्षेत्रीले भने आफूलाई बंगलादेशको कलेजले चिकित्सकको प्रमाणपत्र दिएको दावी गरे। उनले आफू यूवा भएकाले युवा अवस्थामा नै पदक पाउनु राष्ट्रको लागि पनि गर्वको विषय भएको उनको तर्क छ। उनले आफू मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा अनुतीर्ण भएको स्वीकार गर्दै उनले सरकारले आफूलाई पत्याएको जिकिर गरे।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार विभूषण सु्सोभन समारोहकोबीच क्षेत्रीसहित ३ सय ४३ जनलाई विभिन्न मानपदवी प्रदान गरेकी थिईन। तीमध्ये एक जनाले नेपाल रत्न,४ जनाले महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप, १ जनाले सुप्रसिद्ध जनसेवा श्री, ३ जनाले उज्ज्वल कीर्तिमान राष्ट्रदीप, ३ जनाले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप, ९६ जनाले सुप्रवल जनसेवा श्री पाएका थिए।
त्यस्तै एक जनाले कीर्तिमय राष्ट्रदीप, एक सय ६१ जनाले प्रवल जनसेवा श्री, ७४ जनाले जनसेवा श्री गरी ३ सय ४३ जनालाई मानपदवीबाट विभूषित गरिएको हो। त्यसैगरी अलंकार ८७ जनाले र पदक ८७ जनाले गरी जम्मा ५ सय १७ जनालाई विभूषण प्रदान गरिएको थियो।
२०७६ बैशाख २
आजको मौसम : पहाडी क्षेत्रमा हिउँ पर्ने सम्भावना